सेयर बजारका लागि चुनाव कत्तिको फलिफाप ? – OnlinePahar
सेयर बजारका लागि चुनाव कत्तिको फलिफाप ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १८:०९ Basanta Khanal	0 Comments	matadan, share market
काठमाडौं : निर्वाचन र सेयर बजारका बीचमा सामान्यतयः प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध रहने गरेको छ । कुनै बेला चुनाव घोषणा भएदेखि नै बजार बेस्सरी बढ्ने अनि चुनावपछि घट्ने गरेको देखिन्छ भने कुनैमा चुनाव सकिएपछि पनि बजार बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको पाइन्छ । चुनावको आसपासमा बजारमा तेजी आउनुको मुख्य पक्ष भनेको बजारमा पैसाको फ्लो बढ्नु नै हो । अर्थविद्हरुका भनाईमा चुनावले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । त्यही भएर पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले भने चुनावलाई मन पराउने गरेका हुन् ।चुनावमा सरकारले नै मज्जाले पैसा खर्च गर्नुपर्छ । साथै राजनीतिक दलहरुले पनि विभिन्न तरिकाबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेका हुन्छन् । बजार र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्छ । यसो हुँदा ब्याजदर पनि सस्तो हुन जान्छ । फलस्वरुपः यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसैक्रममा हामीले विगतका चुनावी वर्षहरुमा सेयर बजार कस्तो थियो भनेर अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौं । ती तथ्यांकहरुले समग्रमा चुनावी वर्षमा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ । तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने मुख्य पक्ष के हो भने कुनै बेला चुनाव अघि बजार बढेको पाइन्छ भने निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बजार पनि घट्न थालेको सिमेत देखिन्छ । तर कुनै वर्षमा भने चुनावपछि पनि बजार बढ्नेक्रमले निरन्तरता पाएको पाइन्छ । यसमा केही प्रमुख कारण रहेका छन् । चुनावपछि कस्तो सरकार बन्यो ? कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आयो वा आएन ? अनि पुँजी बजारप्रति कस्तो नीति लिने सरकार बन्यो भन्नेले पनि केही प्रभाव पारेको हुन सक्छ । यो सँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बजार कहिलेदेखि बढ्न सुरु गरेको थियो भन्ने पनि हुन्छ ।
लामो अवधिदेखि वृद्धि हुन थालेको बजार कहिलेकाँही चुनावसँगै वियरिस ट्रेन्डमा जान पनि सक्छ । किन भने त्यतिबेलासम्म बजारले निकै उच्च विन्दु बनाइसकेको हुन पनि सक्छ । त्यसतर्फ भने ख्याल गर्नुपर्ने हुनछ । तथापि समग्रमा चुनावी वर्षमा सेयर बजारमा निकै चहलपहल बढ्छ । चुनावअघि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ । यसैक्रममा नेपालमा पनि अहिले मध्यावधि चुनाव घोषणा भएको छ । तथापि यसको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका छन् । यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । यी राजनीतिक विषय र मुद्दा भए । यसैक्रममा राजनीतिको केही पाटाहरुलाई विश्लेषण गर्दा केही छिटो वा केही ढिलै भए पनि मुलुक निर्वाचनतिरै जाने संकेतहरु देखिएका छन् । नियम अनुसार पनि आगामी फागुनमा स्थानीय निकायको पनि निर्वाचन हुनुपर्छ । यसर्थ प्रधिनिधि सभा र स्थानीय निकायहरुको चुनावी माहोलका कारण बुल रनमा रहेको हाम्रो सेयर बजारलाई निकै सहयोग गर्ने विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् । यसैक्रममा विगत ४ वटा प्रमुख चुनावहरुलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारले मिश्रित प्रतिकृया दिएको देखिन्छ । निर्वाचनको दिनको बजार र त्यसको ३ महिना अघिको बजारलाई तुलना गर्दा २ पटक बजार बढेको देखिन्छ भने २ पटक घटेको छ । यसको कारण चुनाव सामान्यतयः ६ महिनाअघि घोषणा गरिएको हुन्छ । कम्तिमा पनि घोषणा भएको ३ महिनाभन्दा छिटो निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । यसकारण नियमित चुनावी वर्ष पहिले नै सबैलाई जानकारी हुने भएकाले पहिलदेखि नै बजार बढ्न थालेको पनि पाइन्छ । यसबाहेक त्यसबेला बुल वा वियर कुन रन चलिरहेको थियो भन्नेले पनि केही प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
यस्तो थियो चुनावी वर्षहरुमा सेयर बजारको अवस्था सन् १९९९ को आम निर्वाचन : सन् १९९९ को आम निवार्चनलाई नेपालको पुँजी बजारले पनि सकारात्मक प्रतिकृया दिएको देखिन्छ । चुनाव हुनुभन्दा ३ महिना अघि अर्थात १९९९ मार्च २ मा १७८.५ विन्दुमा रहेको सेयर बजार चुनाव हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १९३.३ अंकसम्म पुगेको थियो । त्यस समयमा नेपालको पुँजी बजार सुरुवाती चरणमै रहेको थियो । नेप्सेले सेयर कारोबारका लागि ट्रेडिङ फ्लोर सन् १९९४ जनवरीदेखि खुला गरेको हो ।
सन् २००८ को संविधान सभा निर्वाचन : मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सन् २००८ मा भएको थियो । उक्त निर्वाचनको समयमा भने नेपालको पुँजी बजारले नकारात्मक प्रतिकृया दिएको थियो । त्यसबेला निर्वाचन हुनुभन्दा ३ महिना ९८१.४३ विन्दुमा रहेको सेयर बजार निर्वाचन हुने बेलासम्म ७४६.७ विन्दुमा झरेको थियो ।
सन् २०१३ को संविधान सभा निर्वाचन : पहिलो पटक निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान नबनेपछि सन् २०१३ मा देस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा भने नेपालको पुँजी बजारले सकारात्मक गति लिएको थियो । निर्वाचन हुनुभन्दा ३ महिना अघि ५४३.७२ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचक निर्वाचन हुने दिनमा ६३४ विन्दुमा पुगेको थियो ।
सन् २०१७ को आम निर्वाचन : सन् २०१७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका समयमा नेपालको सेयर बजार पुनः तल झरेको देखिन्छ । यद्दपि, त्यसबेला पुँजी बजारको बियरिस गति सुरु भइसकेकाले पनि बजारमा गिरावट देखिएको हो । किनभने चुनावभन्दा निकै पहिलेदेखि बजार वृद्धि क्रममा रहेको थियो ।
उक्त बियरिस चक्र सकिएर गत वर्षदेखि बजार बुल रनमा रहेको छ । त्यसबेला निर्वाचन हुनु भन्दा ३ महिना अघि १६१७.८१ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचक निर्वाचनको दिनसम्ममा घटेर १५१४.३४ विन्दुमा आएकोे थियो । Source: nepalipaisa
← आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ११ जेठ २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं →
१ सय बढी कम्पनीको शेयरमुल्यमा गिरावट, कारोबार रकम कति ?
शनिबार मध्यरातिदेखि फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:३३ Basanta Khanal	0
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मृतकको फोटो अर्कै, आफन्त आक्रोशित भएपछि छानबिन समिति गठन
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२१ Basanta Khanal	0